अप्रील 4, 2019 अप्रील 4, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments डा. राम बहादुर बोहरा, रक्तचाप
सामान्यतया बढी रक्तचाप जस्तै कम रक्तचाप पनि स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ । माथिको सिस्टोलिक रक्तचाप ९० भन्दा कम हुनु हुदैन । कतिपय अवस्थामा केहि व्यक्तिहरूमा पहिले देखि नै रक्तचाप कम भएको हुन सक्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूमा केहि लक्षण नदेखिन सक्छ तर कतिपयलाई भने यसले असर देखाउन सक्छ ।
चक्कर लाग्ने कमजोरी महसुस हुने जस्ता समस्या देखिएमा डाक्टरसंग परामर्श लिनुपर्ने हुन सक्छ । केहि व्यक्तिहरूमा बढेको रक्तचाप एक्कासी घटेमा पनि अप्ठयारो हुन सक्छ । कम ब्लड प्रेशरको कारण दिमागमा र किड्नी दुबैमा असर हुन सक्छ । ब्लड प्रेशर कम हुदाँ किड्नी फेल हुनुको साथै मस्तिष्कमा रक्तप्रवाह घट्न सक्छ ।
त्यस्तै गर्भवस्थामा मुटुको असमान्य धड्कन कम रक्तचापको लक्षण हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा छाती अप्ठ्यारो हुने, सास फुल्ने, चक्कर लाग्ने, आँखाको अगाडि अधेरो देखिनु, अत्यधिक थकाई लाग्नु, कमजोर महसुस हुने जस्ता लक्षण देखिन सक्छ ।
१. पानीको मात्रा
पानीको कमिले शरीरमा रक्तचाप कमहुन सक्छ । दैनिक ४-५ लिटरसम्म पानी चाहिन्छ । रक्तचाप धेरै कम भएमा रगतको नसामा सलाइन चढाउनुपर्ने हुन सक्छ ।
ब्लड प्रेशर कम हुँदा खानामा नुनको मात्रा केहि बढाउनुपर्ने हुन सक्छ । तर बढी नुनको प्रयोगले पनि स्वास्थ्यमा नकरात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।
रक्सी स्वास्थ्यमा नकरात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले बिल्कुलै सेवन गर्नुहुँदैन । कुनै व्यक्तिहरूमा रक्सीले गर्दा पिसाब धेरै आउने, उल्टि हुन सक्ने र शरीरमा पानीको कमी हुन गई ब्लड प्रेशर कम हुन सक्छ ।
खानामा पौष्टिक आहार समावेश गर्नुपर्दछ । शरीरमा पौष्टिक तत्वको कमि हुदाँ ब्लड प्रेशर कम हुनुको साथै कमजोरी हुन सक्छ । स्वास्थ्यका लागि घातक मानिने फास्टफुड खानुभन्दा हरियो सागसब्जी र फलफूल बढी खानुपर्छ ।
५. रक्तचाप कम भएमा
प्राय सबै प्रकारका दीर्घ रोगहरूको अन्तिम अवस्थामा रक्तचाप कम हुन सक्छ । समए समयमा रक्तचाप नाप्ने बानी बसाल्नु राम्रो हो । यस्तो समस्या नहोस् भन्नाका लागी डाक्टरसंग परामर्श लिने बानी बसाल्नु पर्दछ ।
← गुन्द्रुक खानुका फाइदाहरु
श्रीमान श्रीमतीले अरुसँग कहिल्यै भन्न नहुने कुराहरु →
सेप्टेम्बर 20, 2018 साइन्स इन्फोटेक 4
डिसेम्बर 9, 2018 साइन्स इन्फोटेक 1